Harom-paosy sy fanendahana :: Enin-dahy niharan’ny fitsaram-bahoaka teto an-drenivohitra • AoRaha
Harom-paosy sy fanendahana Enin-dahy niharan’ny fitsaram-bahoaka teto an-drenivohitra
Nisesisesy ny fahatrarana mpanendaka sy mpangarompaosy ary mpanao hala-botry teto an-drenivohitra, ny faramparan’ny herinandro teo. Roapolo ny fitambaran’ireo voasambotra.
Tra-tehaky ny fokonolona sy naratra niharan’ny fitsarambahoaka ny enina tamin’ireo. Nahasambotra efatra ambin’ny folo kosa ny polisy. Misy amin’ireo voatondro ho olondratsy ireo no efa nalefa any am-ponja vonjimaika.
Tamina toerana telo, teto an-drenivohitra, no nisy an’ireo enin-dahy niharan’ny hatezeram-bahoaka. Anisan’izany ilay lehilahy teny Ampasika, izay naratra mafy nodarohan’ny andian’olona rehefa tratra avy nanendaka sy nandratra vehivavy iray. Nisy telo lahy saika nanao hala-botry teny Ambolokandrina ka nifanenjehan’ny fokonolona sy voadaroka ihany koa. Nofatoran’ny olona teo amin’ny andrin-jiro ny lehilahy iray hafa tratra saika nangalatra vatoaratra tamina fiara, teny Ankerana.
Mpandroba tantsaha mitondra entana vao maraina sady mpamaky trano sy mpanendaka eny amin’iny faritra 67Ha sy ny manodidina iny ny valo tamin’ireo efatra ambin’ny folo lahy voasambotry ny polisy. Nahatrarana antsy lava telo sy vy roa tany amin’ireo andian-dehilahy ireo. Teny amin’iny faritra Ambohimanarina iny kosa ny dimy lahy tratran’ny polisy mbola noho ny raharaha vaky trano sy hala-botry ary fanendahana hatrany. Polisy nanao fanamiana sivily indray no nahasambotra lehilahy mpangarompaosy teny Analakely.
Fahasemporana tampoka Efatra mirahalahy niara-maty tao an-davapiringa
Raharaham-pitsarana any Fianarantsoa Hadihadiana lalina ny fanolanana tao amin’ny akany iray
Tapatapany • Tranga samihafa
Fivezivezena an-dranomasina :: Narahi-maso ny sambo indiana iray tany Masoala
Voina tany Antsohihy :: Lehilahy maty sempotra tao anaty fiara mpitatitra solika